Ndeapi Akanaka Magetsi Mabhasikoro Pasi pa00 | ebike Shuangye
musha Blog nhau Ndeipi Akanaka Magetsi Mabhasiketi Under $ 1000
Zuva ： 2020-08-06 Zvikamu:nhau/ Blog Views: 3,024 maonero
Ndeipi Yakanakisa Magetsi Bike Pasi pe1000
Bhasikoro remagetsi rinogona kunge riri iro chairo sarudzo kune avo vanoda kukurumidza, kugadzikana uye vasina ziya, uye vanoda kunakidzwa nekutasva kunonakidza uye kunakidza kana kukwira zvenguva dzose. Kwete chete ivo vane hushamwari-hwakanaka, vanowirirana, vanoita zvakasiyana-siyana, vakakwanira kukwira-kure-kure, asi, kazhinji kazhinji kwete, vanogona kuve inzvimbo yekudyara muhupenyu, zvakare. Aya mabhasikoro ari nyore kuchovha munzvimbo dzakazara. Unogona kukwira bhasikoro rako uchishandisa pedals kana kushandisa mota. Zvinokubatsira kuti uzvichengete uine hutano. Tenga iyo bhasikoro remagetsi rakanakisa pasi pe1000 chichava kukosha-kwakawedzerwa mari yekudyara. Mhando yebhasikoro rinofambiswa nemagetsi rinoenderana nezvinhu zvakawanda uye mutengo webhasikoro rinofambiswa nemagetsi zvinoenderana nemaficha uye mhando yezvinhu zvinoshandiswa pakugadzira emabhasikoro emagetsi. Ngatikurukurei mashanu akanakisa emabhasikoro emagetsi ari pasi pe $ 5 muShuangye yemagetsi bhasikoro kambani. Ndinovimba ichakubatsira iwe kusarudza zvakanakira iwe. Ndeapi makomo emagetsi emabhasikoro ari pasi pemadhora mazana mashanu? Gomo remagetsi bhasikoro isarudzo yakajairwa kune vanhu. Iyo yakagadzirirwa kubata yakaoma, isina kuenzana nzvimbo uye mukana wekuwedzera mota simba uye nekumhanyisa futi. Uye ikozvino mabhasikoro emagetsi emagetsi aishandiswa mune dzimwe nzira, kwete chete zviitiko zvekunze.
1.A6AH26 Yakanakisa Electric Mountain Bike
Kana iwe uri kutsvaga yakanakisa yemagetsi gomo bhasiketi pasi pemadhora mazana mashanu ekutangisa nekudzidzira zvekunze. Iyo inonzwisisika mutengo uye inopa kukosha kukuru kune yako mari. Chinhu chikuru chinotaridzika ndechekutaridzika kwemabhasikoro emagetsi kutaridzika kunge yakajairika bhasikoro paunoriona panguva yekutanga, nekuda kwekugadzirwa kwechinyakare gomo rebhasiketi remuchina uye bhatiri rakavanzika. Ichi chiitiko chemabhasikoro ane 1000v 36ah chakavanzika lithium bhatiri, dhizaini yaro inobvisa inoita kuti uibvise kubva kune bhasiketi uye kubhadharisa kune imwe nzvimbo. A full single charge inongoda maawa 10-5 uye kufamba kusvika ku6-40km.60 watt kana 250 watt brushless mota inopa kukwira kwakasimba uye kukurumidza, kugona, unogona kusvika max kumhanya kweanosvika 350km / h. Uyezve, chimwe chinhu chikuru ndeche 21 yekumhanyisa chinhambwe ne derailleurs, inobvumira inomhanyisa, yakatsetseka, uye yakakodzera kutasva munzira mbiri dzakatetepa, pamwe nenzvimbo yakaoma. 160mm mehendi disc brake rutsigiro iwe unogona kukwira zvakachengeteka uchiziva kuti pfupi pfupi braking nzvimbo inogoneswa, uye mabhureki achapa yakasimba braking panguva yekutanga. Nekuda kweiyo aluminium alloy frame, iyi e-bike inorema 21kg chete. Mairi akatasva ma modes, Pedal Anobatsira uye E-Bike, neyaimbova inopa mashanu akasiyana mazinga ekushanda.
2.A6AB26 Electric Mountain Bike Kutengesa
Kana iwe uchida mari, inodhura uye yakasununguka yemagetsi bhasikoro, A6AB26 modhi yemagetsi gomo bhasikoro iri kutengeswa ndiyo yako. Iyi bhasikoro ine 36V 250W yakakwira-inomhanya isina brashi mota iyo inoipa iyo yakakura kukwira-kukwira kugona, shandisa bhasikoro iri pamwe nekukwira kwemakomo, kana kungoita kwekufamba kwemazuva ese. Uye yakagadzirirwa 36v 10ah bhatiri bhatiri iro rinokutendera iwe kuchovha iyo bhasikoro kukwira kusvika ku40km mune yakazara imwechete kuchaja, uye nyore kusvika kumhanya kweanosvika 25km / h. Dhizaini bhatiri rinobviswa ibasa rekuchengetedza zvakare, inotsigira bhatiri kubvisa nekiyi kubva kumagetsi bhasikoro kubhadharisa, saka haufanire kunetseka kuti ingangobiwa. Iri vhiri makumi maviri nematanhatu rakakodzera kukwirwa pane chero terrains, ingave nzira dzenjanji, mavhu, migwagwa yeguta, nzira dzekumashure, kana nzira dzebhasikoro. 26mm yemakanika kumberi uye kumashure mabhureki mabhureki anoshanda zvakanyanya kuona mutyairi kuchengetedzeka pasi pechero mamiriro ekukwira. Iyo yakawanda-inoshanda LCD inoratidzira inowanikwawo pakati pechibato. Inoratidza kuchovha kumhanya, mileage, bhatiri, mota simba. Bhasikoro remagetsi remakomo riri kutengeswa rinouyawo ne160W mwenje wepamberi mwenje wekuonekwa unoona vashandisi vakatasva kuchengeteka. Ndeapi madhorobha emagetsi akanakisa pasi pemadhora mashanu? Kune avhareji yavanofamba, guta bhatiri rakapasirwa bhasikoro rinogona kunge riri rehupenyu hwekuchengetedza hupenyu. Mabhasikoro emagetsi anoitirwa kuchengetedza zvakangoitika, kutasva mabhiza kutenderera mudhorobha, kana kuita nzira yako kutenderera
3.A5AH26 Mutaundi Akanakisa Mabhasikoro Magetsi
Iyi ndeimwe yekutengesa unopisa yemagetsi mota mabhureki muguta bhatiri powered bhasikoro. Iyo yakanaka dhizaini, inosanganiswa nemushandisi-inoshamwaridzika kudzora uye yepamusoro-notch mechanics inoita ino kurapa kuti ukwire. 26 inches inch vhiri dhizaina yakakodzera kune vechikuru, vatyairi kana vadzidzi vekoreji. Iyi mota yemagetsi mabhasiketi anouya aine 36v rechargeable lithium-ion bhatiri yakavanzika mune fureti semagetsi, inobviswawo kubhisa, inongoda maawa 5-6 kupedzisa izere imwechete mhosva. Iyo mota ine simba ye250 watt kana 350 watt, kukwira kusvika kune max kumhanya kwe25-30km / awa nyore. Kunyangwe yePedal Rubatsiro maitiro kana E-Bike maitiro, zviri nyore kutasva bhasikoro rine simba rakanyanya mota simba iro. Iyi bhasikoro inofambiswa bhasikoro ine yakavakirwa-zvakanaka uye yakasimba furemu iyo inowedzera kusimba kweicho bhasikoro. Iyo brake system inoshandisa yakajairwa 160mm disc brake kumberi uye kumashure vhiri, ine yakasimba mabhureki kana iwe uchida kumisa bhasikoro nekukasira. Iyo ebike inoratidzira 21 yekumhanyisa kufambisa sisitimu, ye cruiser bhasikoro remagetsi, inopfuura zvakakwana uye 100mm yekufamba shanduko kusimiswa aluminium alloy pamberi peforogo inopa hukuru hwekuvhunduka hwekutapira paunenge uchifamba munzira.
4.A5AH24 Guta Dzemotokari Mabhasikoro Ari Kutengeswa
Kunyangwe iwe urikugadzira nzira yekuenda kumba kubva kubasa kana kutakura imwe nhumbi, guta rino rine mota mabhasikoro ari kutengeswa anozvibata. Iyi bhasikoro yemagetsi inotora yakaderera-nhanho furemu dhizaini, sanganisa retro uye yazvino inokweretesa kuti ive inoyevedza kuona mumadhorobha mumugwagwa. Yakavakirwa padhuze nehuremu hwesimbi aluminium alloy furemu, iri bhasikoro magetsi rine simba rekumira kwete kwete chete kureba kweguta kuenda asiwo imwe yakaoma nzvimbo. Iyo 36v 10ah lithium bhatiri yakanaka kuidaidza kuti inogara-refu pasi peti-inobatsira mode, uye ingotora maawa mashanu kusvika matanhatu kupedzisa chibharo chakazara, kuchovha 5-6km harisi dambudziko. Chero chipi chinofambiswa-chinobatsira modhi kana e-bhasikoro modhi, 250w isina brushless mota inogara ichipa simba rakaringana kuchovha ine max kumhanya kwe25km / h. Yepamberi kumberi V-brake uye kumashure mabhureki emagetsi ane mota kukiya, uye 3W LED kumberi mwenje kuona kukwira kuchengetedzeka mune yakaderera kuoneka. Kana iwe usingade makumi maviri nemaviri vhiri, kune makumi maviri nemasere-vhiri vhiri rekusarudza iro rakakodzera vanhu vazhinji. Iri guta mabhasikoro emagetsi ari kutengeswa zvakare sarudzo yakanaka yekuendesa chikafu chikafu.
5.A1-7 Kupeta Bhatiri Powered Bike
Iyo 20-folding bhatiri rinofambiswa bhasikoro rakagadzirirwa nezvakanaka zvese zvakaputsika zvinoita kuti rikodzere mumigwagwa yeguta yakatsetseka. Kana iwe uchida zveupfumi, nyore, kukurumidza kuenda, zvirinyore kutakura uye hazvitore nzvimbo yakawanda, isarudzo yakanaka kana iwe uri mutsva kumabhasikoro. Iyo 250W isina brushless mota ichiri yakanaka zvakakwana kugadzirisa matambudziko mazhinji uye inouya ne36V 10Ah yakavanzwa lithiamu bhatiri. Bhatiri rinobviswa richikupa iwe sarudzo yekuchaja zvese zviri zviviri nekudzima bhasikoro. Iwe unogona kusvika pakakwirira kumhanya kwe25km / h, uye pasi pemamiriro akanaka, inogona kuenda kusvika ku40-60 nechaji imwechete. Pane matatu ekutasva modhi aunogona kusarudza kubva - yakachena magetsi maitiro, chitiviri-chinobatsira modhi uye yakajairwa bhasikoro modhi. Iyo yakachena yemagetsi modhi ndiyo yekuenda nayo kana iwe uchida kunakirwa-kure-kure kufamba uchifamba pasina kukwirisa. Iko zvakare kune sarudzo yekusarudza iyo PAS modhi. Iyo pedal yekubatsira modhi ine mashanu matanho eakasarudzika kukwira ruzivo. Multi-function LCD inoratidzira inoratidza simba remota, kugona kwebhatiri, danho rePAS uye nezvimwe. Yakasanganiswa ne7 kumhanya magiya uye 160 disc bhureki system inova nechokwadi chekuchinja uye chine simba mabhureki. Kune mashanu Shuangye (Hotebike) emagetsi mabhasikoro emhando yepamusoro andinotsvaga ayo ari pasi pemadhora mazana mashanu. Muchidimbu, ivo vese vakakoshesa kufunga, saka kana iwe uchifarira mumwe wavo, taura nesu kana usiye meseji iri pazasi. Mamwe mabhasikoro emagetsi anotengeswa, shanyira edu Official Website.
Tags:Yakanakisa Magetsi Bike Pasi pe1000
Prev: 4 zvikonzero vanhu vanofarira magetsi mutyairi bhasikoro
Next: Dzakamhanya zvakapetwa ka750w mota yemagetsi mafuta tire bike